ဗဒေငျ – Shwe Myanmar
ယော မေ အယံ ဘန္တေ
ကုစ္ဆိတော ကုမာရကော ဝါ ကုမာရိကာ ဝါ၊
သော ဘဂဝန်တံ သရဏံ ဂစ်ဆတိ
ဓမ်မဉ်စ ဘိက်ခု သံဃဉ်စ၊
ဥပါသကံ တံ ဘဂဝါ ဓာရတေု
အဇ္ဇတဂ္ဂေ ပါဏုပေတံ သရဏံ ဂတံ။
ဘန္တေ – အရှင်ဘုရား၊
ကု စ္ဆိတော – ဝမ်း၌တည်သော၊
ယော အယံကုမာရောဝါ – အကြင်သတို့သားသည်သော်လည်းကောင်း၊
ယာအယံကုမာရိကာဝါ – အကြင်သတို့သမီးသည်သော်လည်းကောင်း၊
အတ္ထိ – ရှိ၏။
သော – ထိုသန္ဓေသားသည်၊
ဘဂဝန္တံ – မြတ်စွာဘုရားကို၊
သရဏံ – ကိုးကွယ်ရာဟူ၍၊
ဂစ္ဆတိ – ဆည်းကပ်ပါ၏။
ဓမ္မဉ္စ – တရားတော်ကိုလည်းကောင်း၊
ဘိက္ခုသံဃဉ္စ – ရဟန်းသံဃာကိုလည်းကောင်း၊
ဘဂဝါ – မြတ်စွာဘုရားသည်၊
တံ – ထိုသ‌န္ဓေသားကို၊
အဇ္ဇတဂ္ဂေ – ယနေ့ကိုအစပြု၍၊
ပါဏုပေတံ – အသက်ထက်ဆုံး၊
သရဏံ – ကိုးကွယ်ရာဟု၊
ဂတံ – ဆည်းကပ်သော၊
ဥပါသကံ – ရတနာသုံးပါး ဆည်းကပ်တတ်သူဟူ၍၊
ဓာရေတု – မှတ်တော်မူပါအရှင်ဘုရား။
အယံ ဘ‌န္တေ (ဗောဓိရာဇကုမာ‌ရော) ဘဂဝန္တံ
သရဏံ ဂစ်ဆတိ ဓမ်မဉ်စ ဘိက်ခုသံဃဉ်စ။
ဥပါသကံ တံ ဘဂဝါ ဓာ‌ရတေု
အဇ္ဇတ‌ဂ္ဂေ ပါဏု‌ပေတံ သရဏံ ဂတံ။
မေ – တပည့်တော်၏၊
ဗောဓိရာဇကုမာရော – ဗောဓိရာဇ အမည်ရှိသောအကြင် သတို့သားသည်၊
သော – ထိုသတို့သားသည်၊
တံ – ထိုသတို့သားကို၊
မှတ်ချက် ။ ။ (ဗောဓိရာဇကုမာ‌ရော) ဆိုသော
နေရာတွင်‌မိမိသား၊ သမီး၏အမည်‌ကိုထည့်ရွတ်‌ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သရဏဂုံမဆိုတတ်‌‌သေး‌သောသားငယ်‌၊ သမီးငယ်‌များကိုယ်‌စားမိဘက
သရဏဂုံတည်‌‌ဆောက်‌‌ပေးခြင်းဖြစ်‌ပါသည်။ သရဏဂုံတည်‌တတ်‌‌သော သားသမီးများအဖြစ်သက်‌ရှည်‌ကျန်းမာ၍‌ ကောင်းကျိုးအဖြာဖြာရရှိ‌စေနိုင်‌ပါသည်‌။
ဤဂါထာများသည် မဇ္ဈိမနိကာယ၊ မဇ္ဈိမပဏ္ဍာသ၊ ဗောဓိရာဇကုမာရသုတ်တွင် ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဂါထာတော်ဖြစ်ပါသည်။
မေတ္တာဖြင့် – ဆရာခန့် (နေပြည်တော်)
ယော မေ အယံ ဘန်တေ
ကုစ်ဆိတော ကုမာရကော ဝါ ကုမာရိကာ ဝါ၊
သော ဘဂဝနျတံ သရဏံ ဂဈဆတိ
ဓမျမဉျစ ဘိကျခု သံဃဉျစ၊
ဥပါသကံ တံ ဘဂဝါ ဓာရတေု
အဇ်ဇတဂ်ဂေ ပါဏုပတေံ သရဏံ ဂတံ။
ဘန်တေ – အရှငျဘုရား၊
ကု စ်ဆိတော – ဝမျး၌တညျသော၊
ယော အယံကုမာရောဝါ – အကွငျသတို့သားသညျသျောလညျးကောငျး၊
ယာအယံကုမာရိကာဝါ – အကွငျသတို့သမီးသညျသျောလညျးကောငျး၊
အတ်ထိ – ရှိ၏။
သော – ထိုသန်ဓသေားသညျ၊
ဘဂဝန်တံ – မွတျစှာဘုရားကို၊
သရဏံ – ကိုးကှယျရာဟူ၍၊
ဂစ်ဆတိ – ဆညျးကပျပါ၏။
ဓမ်မဉ်စ – တရားတျောကိုလညျးကောငျး၊
ဘိက်ခုသံဃဉ်စ – ရဟနျးသံဃာကိုလညျးကောငျး၊
ဘဂဝါ – မွတျစှာဘုရားသညျ၊
တံ – ထိုသ‌န်ဓသေားကို၊
အဇ်ဇတဂ်ဂေ – ယနကေို့အစပွု၍၊
ပါဏုပတေံ – အသကျထကျဆုံး၊
သရဏံ – ကိုးကှယျရာဟု၊
ဂတံ – ဆညျးကပျသော၊
ဥပါသကံ – ရတနာသုံးပါး ဆညျးကပျတတျသူဟူ၍၊
ဓာရတေု – မှတျတျောမူပါအရှငျဘုရား။
အယံ ဘ‌န်တေ (ဗောဓိရာဇကုမာ‌ရော) ဘဂဝန်တံ
သရဏံ ဂဈဆတိ ဓမျမဉျစ ဘိကျခုသံဃဉျစ။
ဥပါသကံ တံ ဘဂဝါ ဓာ‌ရတေု
အဇ်ဇတ‌ဂ်ဂေ ပါဏု‌ပတေံ သရဏံ ဂတံ။
မေ – တပညျ့တျော၏၊
ဗောဓိရာဇကုမာရော – ဗောဓိရာဇ အမညျရှိသောအကွငျ သတို့သားသညျ၊
သော – ထိုသတို့သားသညျ၊
တံ – ထိုသတို့သားကို၊
မှတျခကျြ ။ ။ (ဗောဓိရာဇကုမာ‌ရော) ဆိုသော
နရောတှငျ‌မိမိသား၊ သမီး၏အမညျ‌ကိုထညျ့ရှတျ‌ရမှာဖွဈပါတယျ။ သရဏဂုံမဆိုတတျ‌‌သေး‌သောသားငယျ‌၊ သမီးငယျ‌မြားကိုယျ‌စားမိဘက
သရဏဂုံတညျ‌‌ဆောကျ‌‌ပေးခွငျးဖွဈ‌ပါသညျ။ သရဏဂုံတညျ‌တတျ‌‌သော သားသမီးမြားအဖွဈသကျ‌ရှညျ‌ကနျြးမာ၍‌ ကောငျးကြိုးအဖွာဖွာရရှိ‌စနေိုငျ‌ပါသညျ‌။
ဤဂါထာမြားသညျ မဇ်ဈိမနိကာယ၊ မဇ်ဈိမပဏ်ဍာသ၊ ဗောဓိရာဇကုမာရသုတျတှငျ ဘုရားရှငျကိုယျတိုငျဟောကွားတျောမူခဲ့သော ဂါထာတျောဖွဈပါသညျ။
မတ်ေတာဖွငျ့ – ဆရာခနျ့ (နပွေညျတျော)
“သငျ့ရဲ့ ညာ လကျဖဝါးကို ဖွနျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျ.. နံပါတျ ဘယျလောကျလဲ”
သင့်ရဲ့ ညာ လက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရအောင်.. နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ?
ကိုယ့်ရဲ့ လက်ဖဝါးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်နော်…
(၁) ရည်ရွယ်ချက် ကြီးမားသောသူ၊ ခေါင်းမာသောသူ
ရည်ရွယ်ချက် ကြီးမားပြီး ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို လေးစား အားကိုး ခံရမည့်သူပါ။
အမှားကို နည်းအောငကြိုးစားနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အမြဲတမ်း မှန်ကန်နေမှာပါ။
ဒါပင်မဲ့ နည်းနည်း ခေါင်းမာသူဖြစ်ပြီး အများအတွက်ထက် ကိုယ့်အတွက်ကို ကြည့်ပြီး အလုပ် လုပ်တတ်သူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက်ထက် ပတ်ဝန်းကျင် အတွက်ကိုလည်း စဉ်းစားတတ်ပါစေ။
(၂) ရိုးသားပြီး ယုံကြည်ရသောသူ၊ လူစိမ်းကို ယုံလွယ် သောသူ
ကိုယ်ချင်းစာတရား ရှိပြီး လူတွေအပေါ် ရိုးရိုးသားသား ဆက်ဆံနိုင်သောသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပင်မဲ့ လူတွေကို သိပ် ယုံလွန်းရင်လည်း မကောင်းပါ။
(၃) ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိသူ၊ တစ်ယောက်တည်း နေရလည်း ပြသာနာ မရှိသူ
အချစ်ရေးမှာ ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိပြီး အကယ်၍ တစ်ယောက်တည်း နေရလည်း ကိစ္စမရှိပါ။ ပျော်အောင်နေတတ်သူပါ။
(၄) အေးအေးဆေးဆေး နေချင်သူ
သည်းခံနိုင်စွမ်း ရှိပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း သင့်တင့်အောင် နေနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်ပြီး ခွင့်လွှတ်နိုင်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သငျ့ရဲ့ ညာ လကျဖဝါးကို ဖွနျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျ.. နံပါတျ ဘယျလောကျလဲ?
ကိုယျ့ရဲ့ လကျဖဝါးကို ကွညျ့ပွီး ဘယျလို လူမြိုးဖွဈမလဲ ဆိုတာကို ကွညျ့ရအောငျနျော…
(၁) ရညျရှယျခကျြ ကွီးမားသောသူ၊ ခေါငျးမာသောသူ
ရညျရှယျခကျြ ကွီးမားပွီး ပညာရှငျတဈယောကျကို လေးစား အားကိုး ခံရမညျ့သူပါ။
အမှားကို နညျးအောငကွိုးစားနိုငျပွီး ဆုံးဖွတျခကျြတှကေ အမွဲတမျး မှနျကနျနမှောပါ။
ဒါပငျမဲ့ နညျးနညျး ခေါငျးမာသူဖွဈပွီး အမြားအတှကျထကျ ကိုယျ့အတှကျကို ကွညျ့ပွီး အလုပျ လုပျတတျသူ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့အတှကျထကျ ပတျဝနျးကငျြ အတှကျကိုလညျး စဉျးစားတတျပါစေ။
(၂) ရိုးသားပွီး ယုံကွညျရသောသူ၊ လူစိမျးကို ယုံလှယျ သောသူ
ကိုယျခငျြးစာတရား ရှိပွီး လူတှအေပျေါ ရိုးရိုးသားသား ဆကျဆံနိုငျသောသူ ဖွဈပါတယျ။
ဒါပငျမဲ့ လူတှကေို သိပျ ယုံလှနျးရငျလညျး မကောငျးပါ။
(၃) ယုံကွညျမှု အပွညျ့ရှိသူ၊ တဈယောကျတညျး နရေလညျး ပွသာနာ မရှိသူ
အခဈြရေးမှာ ယုံကွညျမှု အပွညျ့ရှိပွီး အကယျ၍ တဈယောကျတညျး နရေလညျး ကိစ်စမရှိပါ။ ပြျောအောငျနတေတျသူပါ။
(၄) အေးအေးဆေးဆေး နခေငျြသူ
သညျးခံနိုငျစှမျး ရှိပွီး၊ ပတျဝနျးကငျြနဲ့လညျး သငျ့တငျ့အောငျ နနေိုငျသူ ဖွဈပါတယျ။
အေးအေးဆေးဆေး နနေိုငျပွီး ခှငျ့လှတျနိုငျသူလညျး ဖွဈပါတယျ။
“ပလေိပျလေးတှကေ ပွောပွပေးမယျ့ အနာဂတျမှာ သငျကွုံတှရေ့မယျ့အရာမြား”
ပေလိပ်လေးတွေက ပြောပြပေးမယ့် အနာဂတ်မှာ သင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာများ
(၁) နံပါတ် ၁
ဂုဏ်ယူပါတယ်…သင်ဟာ အချစ်ရေးမှာ အောင်မြင်မူကို ရရှိမှာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် လူပျို အပျိုကြီးဘဝက ကျွတ်လွတ်ပြီး ချစ်သူရသွားတာမျိုး၊ အသည်းကွဲနေသူတွေ ချစ်သူအသစ်ရသွားတာမျိုး၊ ချစ်သူနဲ့ပြန်အဆင်ပြေသွားတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တစ်ဖက်သက်ချစ်ရသူနဲ့ ပိုနှီးစပ်ပြီးချစ်သူတွေဖြစ်သွားတာမျိုးပါ။ ဒီကာလအပိုင်းအခြားမှာ သင်ဟာ အရမ်းကိုစန်းပွင့်နေပါတယ်။ သင်ဟာ ချစ်သူမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ချစ်သူအသစ်သေချာပေါက်ရရှိမယ့် အချိန်ကာလကြီးပါ။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ တွေ့ဆုံမူမျိုးနဲ့ ချစ်သူကိုဆုံစည်းရမှာပါ။
(၂) နံပါတ် ၂
ကံတရားက သင့်ဘက်မှာရှိနေပါတယ်။ လာမယ့်လတွေမှာ သင့်ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေဟာ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက သင့်ဆီကို အဘက်ဘက်က ငွေတွေဝင်နေပြီး သင်ဘာလုပ်လုပ် ပိုက်ဆံရကိုရနေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်တဲ့အရာတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့အခုထဲက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါ။ အကြံပေးချင်တာကတော့ ထီထိုးရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
(၃) နံပါတ် ၃
ဘဝမှာ တစ်ခါမှမကြုံဖူး မလုပ်ဖူးတဲ့စွန့်စားခန်းတွေကို လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်နေရတဲ့ခံစားချက်တွေမရှိပဲ ပျော်ပျော်ကြီးခရီးထွက်ရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အတွက် ဒီခရီးကနေ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေနဲ့ မမေ့နိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မူတွေကို ရရှိမှာအသေအချာပါပဲ။
(၄) နံပါတ် ၄
ကံတစ်ရားက သင့်ဆီကိုတစ်ဖန်ပြန်ရောက်လာပါပြီ။ အရင်တုန်းက သင်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေက သင်မလိုချင်ပဲရရှိခဲ့တဲ့ အရာတွေဖြစ်နေတက်ပါတယ်။ မလိုချင်လည်း စွန့်ပစ်လို့မရပဲ လက်ခံထားခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေက ဘယ်လောက်တောင်စိတ်ပင်ပမ်း လူပင်ပမ်းဖြစ်မလဲ။ အခုဒီအချိန်တွေအားလုံး ပြီးဆုံးတော့မှာပါ။ ကံတရားက သင့်ဘက်မှာအခုရှိနေပြီဆိုတော့ သင်လိုချင်နေတဲ့အရာတွေကို မကြာခင်မှာ ရရှိတော့မှာဖြစ်ပြီး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးလည်း ဖြေရှင်းသွားနိုင်မှာပါ။
credit to lotaya_quiz
ပလေိပျလေးတှကေ ပွောပွပေးမယျ့ အနာဂတျမှာ သငျကွုံတှရေ့မယျ့အရာမြား
(၁) နံပါတျ ၁
ဂုဏျယူပါတယျ…သငျဟာ အခဈြရေးမှာ အောငျမွငျမူကို ရရှိမှာပါ။ ပွောရမယျဆိုရငျ လူပြို အပြိုကွီးဘဝက ကြှတျလှတျပွီး ခဈြသူရသှားတာမြိုး၊ အသညျးကှဲနသေူတှေ ခဈြသူအသဈရသှားတာမြိုး၊ ခဈြသူနဲ့ပွနျအဆငျပွသှေားတာမြိုး ဒါမှမဟုတျ ကိုယျတဈဖကျသကျခဈြရသူနဲ့ ပိုနှီးစပျပွီးခဈြသူတှဖွေဈသှားတာမြိုးပါ။ ဒီကာလအပိုငျးအခွားမှာ သငျဟာ အရမျးကိုစနျးပှငျ့နပေါတယျ။ သငျဟာ ခဈြသူမရှိသေးဘူးဆိုရငျတော့ ခဈြသူအသဈသခြောပေါကျရရှိမယျ့ အခြိနျကာလကွီးပါ။ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ တှဆေုံ့မူမြိုးနဲ့ ခဈြသူကိုဆုံစညျးရမှာပါ။
(၂) နံပါတျ ၂
ကံတရားက သငျ့ဘကျမှာရှိနပေါတယျ။ လာမယျ့လတှမှော သငျ့ရဲ့ငှရေေးကွေးရေးအခွအေနဟော အထှတျအထိပျကို ရောကျရှိနပေါလိမျ့မယျ။ ဆိုလိုတာက သငျ့ဆီကို အဘကျဘကျက ငှတှေဝေငျနပွေီး သငျဘာလုပျလုပျ ပိုကျဆံရကိုရနမှောပါ။ ဒါကွောငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသငျ့တဲ့အရာတှကေို ရဲရဲဝံ့ဝံ့အခုထဲက ရငျးနှီးမွှုပျနှံထားပါ။ အကွံပေးခငျြတာကတော့ ထီထိုးရငျ အကောငျးဆုံးဖွဈပါလိမျ့မယျ။
(၃) နံပါတျ ၃
ဘဝမှာ တဈခါမှမကွုံဖူး မလုပျဖူးတဲ့စှနျ့စားခနျးတှကေို လုပျဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျတှရေောကျလာပါလိမျ့မယျ။ စိုးရိမျပူပနျနရေတဲ့ခံစားခကျြတှမေရှိပဲ ပြျောပြျောကွီးခရီးထှကျရတာမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ သငျ့အတှကျ ဒီခရီးကနေ အတှအေ့ကွုံအသဈတှနေဲ့ မမနေို့ငျတဲ့ပြျောရှငျမူတှကေို ရရှိမှာအသအေခြာပါပဲ။
(၄) နံပါတျ ၄
ကံတဈရားက သငျ့ဆီကိုတဈဖနျပွနျရောကျလာပါပွီ။ အရငျတုနျးက သငျပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့အရာတှကေ သငျမလိုခငျြပဲရရှိခဲ့တဲ့ အရာတှဖွေဈနတေကျပါတယျ။ မလိုခငျြလညျး စှနျ့ပဈလို့မရပဲ လကျခံထားခဲ့ရတဲ့အခြိနျတှကေ ဘယျလောကျတောငျစိတျပငျပမျး လူပငျပမျးဖွဈမလဲ။ အခုဒီအခြိနျတှအေားလုံး ပွီးဆုံးတော့မှာပါ။ ကံတရားက သငျ့ဘကျမှာအခုရှိနပွေီဆိုတော့ သငျလိုခငျြနတေဲ့အရာတှကေို မကွာခငျမှာ ရရှိတော့မှာဖွဈပွီး ရငျဆိုငျနရေတဲ့ပွဿနာတှအေားလုံးလညျး ဖွရှေငျးသှားနိုငျမှာပါ။
ကျွန်မ နဲ့ချစ် သူဟာ လက်တွဲလာတာ ၄ နှစ် ရှိပါပြီ။ ဒီနှစ်ကုန်ရင် လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အလိုလိုနေရင်း
” ငါတို့လမ်းခွဲကြရအောင် သူက ကျွန်မကို မချစ်တော့ပါဘူး၊ အခု သူကအသစ်တွေ့နေပါပြီ လက်တွဲလာတဲ့ အချိန်တွေမှာ ချစ်တယ် ဆိုတာ ညာပြောခဲ့တာပါ
သူက ချစ်သူ အသစ်နဲ့ဒီနှစ်ကုန်ရင် လက်ထပ်တော့မှာ” လို့လာပြောပါတယ်။ ကျွန်မလည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်မ ဆီသူပြန်လာဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။
ကျွန်မ ဘာမှားနေလဲ၊ ဘယ်နေရာတွေမှာ မကောင်းတာလုပ်ခဲ့မိလဲ၊လို့မေးပြီးလိုအပ်တာတွေရှိရင် ကျွန်မပြင်ပါ့မယ်။
သူလိုတာ အားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးပြီး သူ့အလိုကျ အားလုံးဖြစ်စေရပါမယ်။” အရင်လိုပဲ ချစ်သူ ပြန် ဖြစ်နေဖို့ ” ပဲတောင်းဆိုချင်တာပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ပြန်ရလိုက်တာတွေကတော့ သူ့ရဲ့အေးစက်မှု၊ စိတ်မကြည်လင်မှု၊ စိတ်ရှုပ်မှု တွေမို့ ကျွန်မ ဘာလုပ်လုပ် အမှားတွေချည်းပဲ လုပ်မိနေတော့တာပါပဲ။
သူငယ်ချင်းက ကျွန်မကို ဆေးနဲ့ပြုစားတာ သွားလုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်မဒီလုပ်ရပ်တွေကို မကြိုက်တဲ့အပြင် မပတသက် အနားလည်းမသွားချင်ပါ
ဒါပေမယ့် အခုတော့ အချစ်စိတ်နဲ့ သူသာပြန်လာမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို လုပ်ချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ဘိုးတော် ရာစီ ဆီကိုခေါ်သွားမယ်တဲ့။ ဘိုးတော် က အရမ်းတော်ပါတယ်၊ သူငယ်ချင်း အမျိုးတယောက် ခင်ပွန်းက မယားငယ်နဲ့ သွားနေလို့ ဘိုးတော် က ပြန်လာအောင် ခေါ်ပေးတယ်….
ပြန်လာပြီးနောက် သူဟာ ဒီနေ့အထိပဲ သူ့ဇနီးကို သိပ်ချစ် သိပ်အလိုလိုက်လာပြီး အသစ်ထပ်မရှာတော့ဘူး။ ဘိုးတော် အိမ်ကတထပ်အိမ်လေးပါ။
ကား ၁၀ စီးရပ်လို့ရတဲ့ ကားပါကင် လေးရှိပါတယ်။ ပထမနေ့ ကျွန်မ သွားတော့ ကား ၃ စီးရပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
အိမ်ထဲကိုလှမ်းကြည့်တော့ ထိုင်နေသူများလွန်းလို့ အိမ်အဝင်ပေါက် အပြင်တောင်ရောက်နေပါတယ်။ရီမောသံ တွေလည်း
တခါတခါ အပြင်ဘက်ကို ပျံ့လွင့်လာပါတယ်။ သူငယ်ချင်းက ကျွန်မကိုအိမ်ထဲခေါ်သွားပါတယ်။
ကျွန်မမြင်လိုက်ရတာကတော့ ” အသက် ၂၈ – ၂၉ လောက်ရှိမယ့် အမျိုးသား တယောက်ဆံပင်ရှည်၊ တကိုယ်လုံးအပြည့်
ဆေးမှင်ကြောင်အရုပ်တွေ ထိုးထားတယ်။ညှို့မျက်လုံးလေးနဲ့ လက်ကစီးကရက်ကိုပြာချွေလိုက် ရီစရာပြောလိုက် ရီနေလိုက်ပေါ့…..
ဧည့်သည် တွေကလည်း တခါတလေ ရီမောလိုက်ပေါ့ ပျော်စရာကြီး။ သူကကျားသစ်ကွက်လေး ဝတ်ထားတယ်။ စွဲဆောင်မှု
အပြည့်နဲ့ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။သူငယ်ချင်းပြောတဲ့ ဘိုးတော် ဆိုတာသူပေါ့ဘာလို့ငယ်ငယ်လေးပဲ ရှိနေသေးတာလဲ။
ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာ သူငယ်ချင်း က ကျွန်မ ကိုကောင်းတယ်ပြောရင် ရေရှည် ကို ဘာမှမတွေးပဲ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် နာရီဝက်လောက် စောင့်လိုက်ရတယ်။
အရင်ရောက်နေတဲ့ အုပ်စုတွေ ပြန်သွားကြပြီး ကျွန်မတို့အလှည့်ရောက်လာပါပြီ။သူငယ်ချင်း က ( ပန်း ၅ ပွင့်၊ အမွှေးတိုင် ၅ တိုင်၊ )
ငွေ ၁၀၀ ဘတ် ကန်တော့ပြီး ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မချစ်သူ နာမည် နဲ့ နေရပ်ရောရေးပြီး ဘိုးတော် ကိုပေးရပါတယ်။
ကျွန်မ နာမည် ကိုဖတ်ပြီး ကံမကောင်းဘူး၊ အချစ်လုခံရမယ်၊ ချစ်သူ နာမည် ကိုဖတ်ပြီး ဒါမင်းချစ်သူလားလို့မေးတော့ ဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွန်မ ကဖြေလိုက်ပါတယ်။
” ဘာများမေးစရာ ရှိသလဲ “လို့ ဘိုးတော်ကမေးပါတယ်။ ခဏတာ တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။ ဘာမေးရမှန်းလည်း ကျွန်မ မသိပါဘူး။သူငယ်ချင်းက လက်တို့ပြီး ပြောလိုက်လေ ဆိုတာတောင် ဘာပြောရမှန်း မသိပါဘူး။
ဘိုးတော်က မျက်စေ့မှိတ်ပြီး ၅ ခါ – ၁၀ ခါထိ ဂါထာ ရွတ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မ ကို လှည့်ကြည့်ပြီး သူ့ကိုသိပ်ချစ်လို့ အခုတော့ စိတ်ဆင်းရဲနေရပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ တောင်ကြံနေပြီ။
သူကမင်းဆီကို ပြန်လာစေချင်သလား ” လို့ လှည့်မေးပါတယ်။ ” ပြန်လာစေချင်ပါတယ် “လို့ကျွန်မဖြေ လိုက်ပါတယ်။ ” ဒါဆိုရင် ငါကမင်းကိုကူညီမယ်။ ဒါပေမယ့် ဝန်ဆောင်ခ ပေးရမှာနော် မင်းမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
” ” နှစ်ထောင်ပါရှင် ” ဘိုးတော် က မျက်စေ့မှိတ်လိုက်ပြီး ” မဟုတ်ဘူး အိတ်ထဲမှာ ငါးထောင်ဘတ် ရှိတယ်။ ဘဏ်စာအုပ်ထဲမှာ ဘတ် ၃ သောင်း ထပ်ရှိသေးတယ်။
” ကျွန်မအရမ်းအံ့ဩသွားတယ်။ ဘိုးတော်က ဘယ်လိုများ သိတာပါလိမ့်။ ” သူပြန်လာစေချင်ရင် ဘိုးတော် ကို ဝန်ဆောင်ခ ဘတ် ၃ သောင်း ပေးရယ်။ ” ” သဘောတူပါတယ် ” လို့ ကျွန်မ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းက ကျွန်မ ကို ” ရူးနေလား ဘတ် ၃ သောင်းကြီးများတောင် မစဉ်းစားတော့ဘူးလား ” အံ့ဩစွာနဲ့ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုတော့ ချစ်သူ ပြန်လာဖို့ထက် ဘယ်အရာမှ ကျွန်မအတွက် အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ဘိုးတော် ကကျွန်မမျက်နှာကို ပြုံးကြည့်ရင်းနဲ့“………တွေကို သွားယူခိုင်းပါတယ်။
”ကျွန်မ အစီအစဉ် စလုပ်ရန် လိုအပ်တာတွေ ယူလာခိုင်းပါတယ်။ နောက်နေ့မနက်လင်းတော့ ဘိုးတော်ကိုသွားတွေ့ပါတယ်။ အရင်ရောက်သူတွေ များလွန်းတာမို့ နေ့လည် ၂ နာရီ မှပဲ ကျွန်မ အလှည့်ကိုရောက်ပါတော့တယ်။
ဘိုးတော် ကကျွန်မကို ပြုံးပြပါတယ်။ ” ပရိတ်ရေနဲ့ ရေသန့်စင်ရမယ် ” ဘိုးတော်က အမျိုးသား တယောက်ကို ကျွန်မအား ပရိတ်ရေနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင် ပေးခိုင်းပါတယ်။ ဒီအမျိုးသားကလည်း ဂါထာ တွေရွတ်ရင်း ကျွန်မကိုရေသန့်စင် ပေးပါတယ်။
ပြီးနောက် ကျွန်မယူလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာအောင် ရွတ်ဖတ်နေပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မလက်မှာ ပရိတ်ကြိုး ချည်ပေးပြီး သူခိုင်းတာတွေ လုပ်ရန်မှာကြားပါတယ်။
၁။ နေ့တိုင်း ညနေခင်းမှာ ကျွန်မက ခြေလှမ်း ၉၉၉ လှမ်း လမ်းလျှောက်ရပါမယ်။
၃။ အဖေ ဒါမှမဟုတ် အမေ နဲ့ နေ့တိုင်းဖုန်းဆက်ပြီး ဖြစ်ပျက်သမျှကို မလိမ်ညာပဲ အကုန် ရင်ဖွင့်ပြောပြရပါမယ်။
ဒီ ၁၅ ရက် အတွင်းမှာ ပေးထားတဲ့ ကတိ အတိုင်း တိကျစွာလုပ်နိုင်ရင် ချစ်သူ ဟာ ကျွန်မဆီကိုပြန်လာမှာ သေချာနေပါတယ်။ ကျွန်မ ဟာ ဘိုးတော် ပြောတဲ့ အချက်တွေကို ကတိ ပေးထားတဲ့အတိုင်း တိကျစွာလုပ်သွားပါတယ်။
ပထမရက်၊ ဒုတိယရက်၊ တတိယရက်၊ စတုတ္ထရက်၊ ပဉ္စမရက်…. ၁၅ ရက် အပြီးမှာတော့ ပေးထားတဲ့ ရက်ပြည့်သွားပြီမို့ နောက်နေ့မနက်အစောကြီးပဲ ကျွန်မက ဘိုးတော် ဆီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
” ဘယ်လိုနေလဲ ခံစားနေရတာတွေ သက်သာလာတယ် မဟုတ်လား ” လို့ဘိုးတော် ကမေးပါတယ်။ ” ဟုတ်ကဲ့ စိတ်ပိုချမ်းသာ နေရသက်သာလာပါတယ် ” ” သူ့ကို သိပ်ချစ်တာပဲလား ” လို့ဘိုးတော် ကမေးပါတယ်။
” ဟုတ်ကဲ့ ” ” အမေ့ဆီကို နေ့တိုင်းဖုန်းဆက်ခဲ့ရဲ့လား ” ” ဆက်ပါတယ် ”” အမေ ဘာပြောသေးလဲ၊
သူဝမ်းနည်းနေလား ” ” အမေ ဘာမှမပြောပါဘူး၊ သူဝမ်းနည်းနေပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းချင်း ကျွန်မ ကို နှစ်သိမ့်ချော့မော့ပါတယ်။
” ” အမေ ဝမ်းနည်းနေတော့ မင်းရောဝမ်းမနည်းဘူးလား ” ကျွန်မကတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်
စပြီးစဉ်းစားနေမိပါပြီ။ ” ဝမ်းနည်းပါတယ် ”” မင်းငိုတော့ အမေ ကဘာပြောလဲ ” ” အမေလည်း လိုက်ငိုပါတယ်
” ” အမေ ကိုချစ်လား ” ” ချစ်ပါတယ် ” ” မင်းကိုဘယ်သူက ဝမ်းနည်းအောင် လာလုပ်တာလဲ၊ မင်းဒီလိုခံစားနေရအောင် ဘယ်သူကလာလုပ်တာလဲ၊ ဟိုအမျိုးသား ပေါ့ဟုတ်လား ” ကျွန်မ တိတ်ဆိတ်စွာ ထိုင်နေမိတယ်။ မျက်ရည်တွေ စကျလာပြီ။
” အလုပ်ကရတဲ့ ပိုက်ဆံ အမေ ကိုပေးဖူးလား၊ ဈေးမှာဟင်းတွေတွေ့ရင် အမေဒါလေးကြိုက်တတ်တယ် ဆိုပြီးသတိယ တတ်လား၊ မင်းဘာဟင်းကြိုက်တတ်တာလဲရော မှတ်မိရဲ့လား၊
နေ့တိုင်းစားဖို့ဝယ်လာတဲ့ ဟင်းတွေဟာ မင်းအကြိုက်လား၊ မင်း ချစ်သူ အကြိုက်လား၊ ဘာဖြစ်လို့များသူက မင်းရဲ့သွေးသားထဲထိရောက်အောင် ဩဇာလွှမ်းမိုး နေရတာလဲ” မင်းကိုသူ ဘာလို့ပစ်သွားရတာလဲ ဖြေလို့ရမလား…..
” ” သူ အသစ်ထပ်တွေ့သွားလို့ပါ ”” ဘာလို့သူ အသစ်ထပ်တွေ့သွားရတာလဲ ”
” မသိပါဘူး ” ပြောရင်း ကျွန်မ က မျက်ရည် သုတ်လိုက်ပါတယ် ”
” ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒါဟာ သဘာဝ ပဲလေ၊ သဘာဝ ဆိုတာရော နားလည်ရဲ့လား၊ လူကောင်း ဟာကောင်းတာပဲတွေးမယ်၊ လုပ်မယ်၊ ပြောမယ်။
မကောင်းတဲ့သူရဲ့ အတွေးဟာလည်း မကောင်းတာပဲ ဖြစ်လာမယ်၊ ဘဝမှာ ဒီလို ဆင်းရဲဒုက္ခ တွေတသက်လုံးကြုံချင်ရင်တော့ မင်းချစ်သူ ကိုပြန်လာခိုင်းလိုက်ပေါ့၊
ဒါပေမယ့် မင်းဘဝကိုပျော်ရွှင်စေချင်ရင်၊ အမေကိုဝမ်းမနည်းစေချင်ရင်၊ ဘဝကိုပိုကောင်းစေချင်ရင်၊ လူကောင်းတွေနဲ့သာတွေ့စေချင်ရင်တော့ မင်းချစ်သူကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ အဘိုးတော့ လူတွေအသဲကွဲလို့သေတာ တခါမှ မတွေ့ဖူးသေးဘူး။
ဒါပေမယ့် လူတွေဘာလို့သေတာလဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ မစဉ်းစားတတ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရှုံးပေးလို့စိတ်ပျော့ညံ့လို့၊ သူ့အကြောင်းမတွေးရင် စိတ်ကူးထဲမှာတောင် မရှိတော့ရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မင်းခံစားရတာတွေ သက်သာလာမယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာကို မလုပ်ဖို့တားဆီးလို့ရပေမယ့် စိတ် ကိုတားဆီးဖို့ဆိုတာ တကယ်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒ မရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။စိတ်ကမင်းပိုင်တာပဲလေဒါလေးတောင် နိုင်အောင်မတားဆီးနိုင်ရင် မင်းဘဝမှာ တသက်လုံး အရှုံးပေးနေရပြီ။
အကယ်၍ စိတ်ကိုအနိုင်ရရင် တားဆီးနိုင်ရင်မင်း စိတ်မဆင်းရဲ ရတော့ဘူး။ ဘယ်သူမှ မင်းကိုလာပြီးမကယ်နိုင်ဘူး၊ဘယ်ဆရာဝန် မှလည်း မင်းကိုပျောက်အောင်လာ မကုပေးနိုင်ဘူး။
မင်း ကိုကူညီပေးနိုင်တာဆိုလို့ မင်းကိုယ်တိုင်နဲ့ အချိန်ပဲ ရှိတယ်။ ၁၅ ရက် အတွင်းမှာ ဘယ်လိုနေလဲ။
” ” ဘာမှမတွေးတာမို့ နေလို့ကောင်းပါတယ် ” ” စိတ်ကိုပြတ်အောင်ဖြတ်ပြီး ဆက်လုပ်ပါ၊ ဒါဟာအရမ်းကို ခက်ခဲလိမ့်မယ်၊ ဖြည်းဖြည်းချင်း အချိန်ယူရမှာပေါ့။ အမေ ကိုသာ ပိုပြီးသတိယနေပါ။ စိတ်ညစ်စရာတွေရှိလာရင် အမေကိုရင်ဖွင့်ပါ။
သူ့ဆီကိုစိတ်တွေ မရောက်သွားအောင်စိတ်ကို သတိလေးနဲ့ထိန်းပါ။ ၁၅ ရက် အတွင်းမှာ သူမရှိလည်း မင်းနေနိုင်တာပဲ။ နောက်တော့နေတတ်သွားမှာပါ။ မင်းလွယ်လွယ်နဲ့ မသေနိုင်သေးပါဘူး မဟုတ်လား။
စိတ်ဖြတ်လိုက်ပါ။ ဒီ့ပြင်အရာတွေမှာ စိတ်ကိုနှစ်ထားလိုက်ပါ။ သူ့အကြောင်းကိုစိတ်ကူးထဲတောင် မထည့်ပါနဲ့။ မကောင်းတဲ့သူဟာသူ့ ဘဝ နဲ့သူသွားလိမ့်မယ် ။
” ဘိုးတော်က အိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံ ဘတ် ၃ သောင်းကို လှမ်းနှိုက်ပြီး ကျွန်မကို ပြန်ပေးပါတယ်။ ” ဒီ ပိုက်ဆံ ဘတ် ၃ သောင်း ကို ဘိုးတော် မယူပါဘူး။ ဘတ် ၂ သောင်းကိုမင်းပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါ။ ဘတ် ၅ ထောင်က အမေ ကိုပေးလိုက်ပါ။
ကျန်တဲ့ဘတ် ၅ ထောင်ကိုမင်းယူပြီး အဝတ်အစားလှလှလေးတွေနဲ့ မျက်နှာ အသားအရေအလှပြင် ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီး မင်းကိုယ်မင်း ဒီ့ထက်ပိုကြည့်ကောင်းအောင် ပြင်ဆင်ပါ ”လို့ပြောပြီးတော့ ဘိုးတော် ကရီမောနေပါတယ်။
” ဘိုးတော် ပြောတာမှတ်ထားပါ၊လူတွေကို မယုံပါနဲ့၊ အပေါ်ယံ အပြင်ပန်း ကိုကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့၊ဘယ်ဘိုးတော် ဆီကိုမှနောက်မသွားပါနဲ့၊ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ စွဲလန်းစရာ ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေ ပါလာပြီးသားပါ။
ဒီအရာတွေကို တခြားသူလာပြီး နှစ်သက်လား မနှစ်သက်ဘူးလား ဆိုတဲ့အပေါ်ပဲ မူတည်နေပါတယ်။တချို့လူတွေက အဝတ်အဝါရောင်၊ အဖြူရောင်တွေ ဝတ်ထားပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်ရင်းကလေးကတော့ လူစိတ်ကိုမရှိကြတာ အမှန်ပဲ။
မင်းကမိန်းခလေးဆိုတော့ ပိုတောင် သတိ ရှိသင့်တယ်။ လူကောင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့ ကောင်းပါရဲ့၊ လူယုတ်မာနဲ့တွေ့ရင် ခန္ဓာကိုယ်၊ ပိုက်ဆံ၊ အသဲနှလုံးတွေလည်း ဆုံးရှုံးရမယ်။
မင်း ညံ့လို့ဒီလိုခံရတာမို့ ဘယ်သူ့အပြစ်လဲ လို့လည်းပြောလို့မရဘူး။ သူများတွေကို ရင်ဖွင့်ပြဖို့လည်း မသင့်တော်လှဘူး။ မင်းရှေ့ဆက်မတိုးနဲ့ ဒီမှာတင် ရပ်လိုက်ပါတော့။
ဒီလိုမျိုး ဒီ့ပြင် ဘိုးတော်ေ တွေဆီလည်း ထပ်မသွားပါနဲ့တော့။ ဘိုးတော် ဆုံးမတာတွေကို သေချာမှတ်ထားပါ။ ဒီနေ့မင်းချစ်သူ လာလိမ့်မယ်။ မင်းဘာမင်း ဘာလုပ်သင့်လဲ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ပါ ” ကျွန်မလည်းအခန်းကို ပြန်လာခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တာတွေ အားလုံးကို အသေးစိတ် ပြန်တွေးနေမိတယ်။
ကျွန်မရဲ့နာကျင်တဲ့ ခံစားမှုတွေ၊ အရင်ကဆို သူ့ကို သတိယတိုင်း ကျွန်မ မနေတတ်အောင်ခံစားရတယ်၊ အခုတော့ အဲ့ဒီလိုမျိုး မခံစားရတော့ဘူး။ အရင်ကကျွန်မ ရဲ့ ပျော့ညံ့တဲ့စိတ်တွေဟာ အခုဆို အရမ်းမာလာတာ တွေ့ရတယ်။
ဘယ်အချိန်ထဲက ကျွန်မ ဒီလို ခံနိုင်ရည် ရှိလာတာလဲ မသိတော့ပါဘူး။ သူ့ကိုလွမ်းတိုင်း တမ်းတစွာ ကျလာတတ်တဲ့ မျက်ရည် တွေလည်း အခုတော့ ဘယ်ပျောက်ကုန်ပြီ လည်းမသိတော့ပါဘူး။
ဘိုးတော် ရဲ့ဆုံးမစကားတွေကတော့ နားနှစ်ဘက်ထဲမှာ သိမ်းထားတယ်။အခုအချိန်ကစပြီး ကျွန်မပြတ်သားတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အခန်းတံခါးခေါက်သံ ကြားရပါတယ်။
” ဘယ်သူလဲ ” လို့ကျွန်မ မေးလိုက်ပါတယ်။ ” ငါပဲဟေ့ ” လို့ဖြေသံကြားတော့ ဘိုးတော် ပြောထားတာမှန်နေတာပဲ သူတကယ်လာတယ်။
ခုနက ပြတ်သား တင်းမာနေတဲ့ စိတ်တွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ၊နှလုံးခုန်မြန်လာပြီ၊ စိတ်တွေလည်း ပျော့ညံ့စပြုလာပြီ၊ ” ဘာကိစ္စ ရှိလို့လဲ ” လို့အခန်းတံခါးမဖွင့်ပေးပဲ မေးလိုက်တယ်၊” ငါ သတိယလို့ပါ အခန်းတံခါးလေးဖွင့်ပေးပါအုံး
” ကျွန်မတွေဝေစပြုလာပြီ မျက်ရည်တွေစကျလာပြီ ဘယ်လိုများ လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ၊ ဘိုးတော်ဆုံးမထားသံတွေ ပြန်ကြားယောင်လာတယ်၊ အမေ့ကိုလည်း သတိယတယ်။
” ပြန်လိုက်ပါအုံးနော် ဒီနေ့ကျွန်မစကားမပြောချင်သေးဘူး။ အခု ဒီမှာအမေလည်းရောက်နေတယ်၊ ပြန်ပါတော့ ”လို့ညာပြောလိုက်မိပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့စိတ်တွေ သိပ်မတင်းမာနိုင်သေး၊မပြတ်သားနိုင်သေးတာမို့ ဒီနေ့တွေ့လိုက်ရင်ကျွန်မ အရင်လိုပဲ သူ့ကိုပြန်သံယောဇာဉ် ရှိလာမိမှာမို့ အမေ ကိုအကြောင်းပြပြီး လိမ်လိုက်ရတာပါပဲ။
ဒီနေ့အထိ ကျွန်မ ဘဝ အသစ်ကို အစပျိုးပေးသူ ဘိုးတော် ထံမှာ ကျွန်မ တပည့်ရင်း အဖြစ်ခံယူထားပါတယ်။ ဘိုးတော်နဲ့သာမတွေ့ရင် ကျွန်မဘဝ လည်းဘာတွေဖြစ်လာမလဲ မတွေးရဲတော့ပါ။
လူဆိုး လူလိမ် တွေနဲ့တွေ့ပြီးဘာတခုမှမကျန်အောင် အကုန်ဆုံးရှုံး ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းများကို ပြောချင်တာကတော့ ဘိုးတော် တွေဆိုတာ ဒီလိုကောင်းသူမျိုး ရှာရခက်ပါတယ်လို့ သတိပေးချင်တာပါပဲ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို ခြေထောက်တွေ ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုရင် သင် ယုံပါ့မလား …?
ဒါဟာ ရှေးကတည်းက ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့ နည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အထိုက်အလျောက်လည်း မှန်ကန်ပါတယ် …။
ကိုယ့်ခြေထောက်ပုံစံက ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ အရင်ဆုံး တိုက်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် တခြားလူတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေကိုပါ သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းလိုက်ပါအုံးနော် …။
ခြေချောင်းလေးတွေ အားလုံးက မတိမ်းမယိမ်းလေးနဲ့ လှပပါတယ်။ တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်း အတိုအရှည်ကလည်း သိပ်မကွာပါဘူး …။
ခြေမကနေ ခြေသန်းလေးအထိ အားလုံးက အနိမ့်အမြင့် အစဉ်လိုက်အတိုင်း သွားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ ဒီလိုခြေထောက်ပိုင်ရှင်မျိုးက လျှို့ဝှက်တတ်ပါတယ် …။
တစ်ကိုယ်တည်းနေတတ်တယ်၊ စိတ်အပြောင်းအလဲလည်း မြန်ကြပါတယ် …။
သူကျတော့ ခြေချောင်းတွေက ခပ်ကားကားပဲ။ ခြေမနဲ့ ကပ်လျက်ခြေချောင်းတွေက တခြားခြေချောင်းလေးတွေနဲ့ အတော်ကို ပုံစံကွဲပါတယ် …။
ဒီလိုခြေထောက်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် အပေါင်းအသင်းများပါတယ်။ ခင်စရာလည်းကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလိုခြေထောက်ပုံစံမျိုးက အတွေ့များရတတ်ပါတယ် …။
ခြေချောင်းတွေအားလုံးက ညီညီညာညာ ရှိနေပါတယ်။ လေးထောင့်ပုံသဏ္ဍန်မျိုးပါပဲ။ ဒီခြေထောက်ပိုင်ရှင်တွေက စိတ်တည်ငြိမ်ကြတယ်၊ လက်တွေ့ဆန်ကြတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ လူတွေလို့ ဆိုပါတယ် …။
တခြားခြေချောင်းတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ခြေညှိုးက အရှည်ဆုံးပဲ။ ခြေမထက်တောင် ရှည်နေသေးတယ်။ အနုပညာဆန်တဲ့ ခြေထောက်ပိုင်ရှင်တွေလို့ ဆိုရမယ့်လူမျိးပါ …။
ခံစားလွယ်သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အားကစားသမားတွေထံမှာ ဒီခြေထောက်ပုံစံမျိုးကို အတွေ့များတတ်ပါတယ် …။
၅။ ကပ်နေတဲ့ ခြေသန်းလေး”
ခြေသန်းလေးက အခြားခြေချောင်းတွေဘက်ကို ယိမ်းပြီး ကပ်နေပါတယ်။ ခြေသန်းတစ်ချောင်းတည်းလည်း မလှုပ်နိုင်ပါဘူး …။
ခြေသန်းကြွက်သား မကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဘာသာ ကပ်နေတာမျိုးပါ။ စိတ်ငြိမ်တယ်၊ ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် …။
ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်တဲ့လူမျိုးပါ။ ရှေးရိုးဆန်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားသူတွေလည်း ဖြစ်တယ် …။
၆။ ကားနေတဲ့ ခြေသန်းလေး”
တခြားခြေချောင်းလေးတွေက စုနေပြီး ခြေသန်းတစ်ချောင်းတည်း အပြင်ဘက်ကို ကားထွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဘဝနဲ့ နေထိုင်လိုကြတဲ့ စိတ်ရှိကြတယ် …။
စွန့်စားရတာ ဝါသနာပါတယ်။ စိတ်ကို သက်တောင့်သက်သာပဲထားကြပြီး အပြောင်းအလဲကို မကြောက်ကြသူတွေပါ။ ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ဘယ်တော့မှ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကို မရှိပါဘူး …။
ကိုယ့်စိတ်ကိုပဲ ဦးစားပေးတတ်ကြတဲ့ သူတွေပါ။ လူတွေက ဘယ်လိုပဲ ထင်မြင်နေပါစေ ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုပဲ လုပ်တတ်ကြပါတယ် …။
ဒါပေမဲ့ သူတို့က ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ လူတွေလည်း ဖြစ်နေကြပြန်ရော …။
ခြေခလယ်က ခြေညှိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ညွှတ်နေပါတယ်။ အကျိုးအမြတ်ရဖို့အတွက် ဂရုတစိုက် စီမံကိန်းချကြတယ်။ စနစ် ကျတယ် …။
ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဆို အားလုံးကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်တတ်ကြသူတွေပါ …။
၉။ ခြေညှိုးနဲ့ခြေခလယ် ပူးမနေဘူး”
ခြေညှိုးနဲ့ ခြေခလယ်ကြားမှာ ဟနေတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြေရာပြေကြောင်း ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သူ၊ ညှိနှိုင်းတတ်ကြ သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ ။
ခွထေောကျ ပုံစံက ပွောပွနတေဲ့ လူတှရေဲ့အကွောငျး…
လူတဈယောကျရဲ့ အကငျြ့စရိုကျနဲ့ စိတျနသေဘောထားကို ခွထေောကျတှေ ကွညျ့ပွီး ခနျ့မှနျးလို့ရတယျဆိုရငျ သငျ ယုံပါ့မလား …?
ဒါဟာ ရှေးကတညျးက ပျေါထှနျးလာခဲ့တဲ့ နညျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ အထိုကျအလြောကျလညျး မှနျကနျပါတယျ …။
ကိုယျ့ခွထေောကျပုံစံက ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုတာ အရငျဆုံး တိုကျကွညျ့ပါ။ ပွီးရငျ တခွားလူတှရေဲ့ စိတျနသေဘောထားတှကေိုပါ သူ့ရဲ့ခွထေောကျကိုကွညျ့ပွီး ခနျ့မှနျးလိုကျပါအုံးနျော …။
ခွခြေောငျးလေးတှေ အားလုံးက မတိမျးမယိမျးလေးနဲ့ လှပပါတယျ။ တဈခြောငျးနဲ့တဈခြောငျး အတိုအရှညျကလညျး သိပျမကှာပါဘူး …။
ခွမေကနေ ခွသေနျးလေးအထိ အားလုံးက အနိမျ့အမွငျ့ အစဉျလိုကျအတိုငျး သှားတဲ့ ပုံစံမြိုးပါ။ ဒီလိုခွထေောကျပိုငျရှငျမြိုးက လြှို့ဝှကျတတျပါတယျ …။
တဈကိုယျတညျးနတေတျတယျ၊ စိတျအပွောငျးအလဲလညျး မွနျကွပါတယျ …။
သူကတြော့ ခွခြေောငျးတှကေ ခပျကားကားပဲ။ ခွမေနဲ့ ကပျလကျြခွခြေောငျးတှကေ တခွားခွခြေောငျးလေးတှနေဲ့ အတျောကို ပုံစံကှဲပါတယျ …။
ဒီလိုခွထေောကျပိုငျရှငျတှကေတော့ ယဘေုယအြားဖွငျ့ အပေါငျးအသငျးမြားပါတယျ။ ခငျစရာလညျးကောငျးပါတယျ။ ပွီးတော့ ဒီလိုခွထေောကျပုံစံမြိုးက အတှမြေ့ားရတတျပါတယျ …။
ခွခြေောငျးတှအေားလုံးက ညီညီညာညာ ရှိနပေါတယျ။ လေးထောငျ့ပုံသဏ်ဍနျမြိုးပါပဲ။ ဒီခွထေောကျပိုငျရှငျတှကေ စိတျတညျငွိမျကွတယျ၊ လကျတှဆေ့နျကွတယျ။ ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ လူတှလေို့ ဆိုပါတယျ …။
တခွားခွခြေောငျးတှနေဲ့ယှဉျရငျ ခွညှေိုးက အရှညျဆုံးပဲ။ ခွမေထကျတောငျ ရှညျနသေေးတယျ။ အနုပညာဆနျတဲ့ ခွထေောကျပိုငျရှငျတှလေို့ ဆိုရမယျ့လူမြိးပါ …။
ခံစားလှယျသူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ အားကစားသမားတှထေံမှာ ဒီခွထေောကျပုံစံမြိုးကို အတှမြေ့ားတတျပါတယျ …။
၅။ ကပျနတေဲ့ ခွသေနျးလေး”
ခွသေနျးလေးက အခွားခွခြေောငျးတှဘေကျကို ယိမျးပွီး ကပျနပေါတယျ။ ခွသေနျးတဈခြောငျးတညျးလညျး မလှုပျနိုငျပါဘူး …။
ခွသေနျးကွှကျသား မကောငျးတာတော့မဟုတျပါဘူး။ သူ့ဘာသာ ကပျနတောမြိုးပါ။ စိတျငွိမျတယျ၊ ခငျြ့ခြိနျနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ …။
ကိုယျ့ဘဝကိုယျ ခနျ့မှနျးတှကျဆနိုငျတဲ့လူမြိုးပါ။ ရှေးရိုးဆနျပွီး အလုပျကွိုးစားသူတှလေညျး ဖွဈတယျ …။
၆။ ကားနတေဲ့ ခွသေနျးလေး”
တခွားခွခြေောငျးလေးတှကေ စုနပွေီး ခွသေနျးတဈခြောငျးတညျး အပွငျဘကျကို ကားထှကျနတော ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျပိုငျဘဝနဲ့ နထေိုငျလိုကွတဲ့ စိတျရှိကွတယျ …။
စှနျ့စားရတာ ဝါသနာပါတယျ။ စိတျကို သကျတောငျ့သကျသာပဲထားကွပွီး အပွောငျးအလဲကို မကွောကျကွသူတှပေါ။ ကွညျ့လိုကျရငျလညျး ဘယျတော့မှ တညျတညျငွိမျငွိမျကို မရှိပါဘူး …။
ကိုယျ့စိတျကိုပဲ ဦးစားပေးတတျကွတဲ့ သူတှပေါ။ လူတှကေ ဘယျလိုပဲ ထငျမွငျနပေါစေ ဂရုမစိုကျတတျဘူး။ ကိုယျလုပျခငျြတာကိုပဲ လုပျတတျကွပါတယျ …။
ဒါပမေဲ့ သူတို့က ခနျ့မှနျးရခကျတဲ့ လူတှလေညျး ဖွဈနကွေပွနျရော …။
ခွခေလယျက ခွညှေိုးနဲ့ဆနျ့ကငျြဘကျကို ညှတျနပေါတယျ။ အကြိုးအမွတျရဖို့အတှကျ ဂရုတစိုကျ စီမံကိနျးခကြွတယျ။ စနဈ ကတြယျ …။
ဘယျအခွအေနမြေိုးမှာမဆို အားလုံးကို ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျး လုပျတတျကွသူတှပေါ …။
၉။ ခွညှေိုးနဲ့ခွခေလယျ ပူးမနဘေူး”
ခွညှေိုးနဲ့ ခွခေလယျကွားမှာ ဟနတေဲ့ ပုံစံမြိုး ဖွဈပါတယျ။ ပွရောပွကွေောငျး ပွောဆိုဆကျဆံတတျသူ၊ ညှိနှိုငျးတတျကွ သူတှပေဲ ဖွဈပါတယျနျော …။ ။
“မိမိနအေိမျကို မ ကောငျး သော အရာမြားကနေ ကာကှယျတား ဆီး ပေး နို ငျ တဲ့ သဈဂပြိုးနဲ့ လော ကီ ပ ညာ ရ ပျ”
မိမိနေအိမ်ကို မကောင်းသော အရာများကနေ
ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ သစ်ဂျပိုးနဲ့ လောကီပညာရပ်
သစ်ဂျပိုးအမှုန့် အနည်းငယ်ကိုယူပြီး နေအိမ် ဝင်ပေါက်မှာ ဖြန်းပေးပါ…
မကောင်းတဲ့အရာတွေအိမ်ထဲကို မဝင်စေဘူး အတိုက်အခိုက်ကင်းတယ် လာဘ်ပွင့်စေတယ်…
သစ်ဂျပိုးအနည်းငယ် ဆနွင်းအနည်းငယ်ကို ရေထဲထည့်ပြီး ရေချိုးပေးရင်မကောင်းတဲ့
အညစ်အကြေးတွေ အညှိတွေ သန့်စင်စေတယ် ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရရှိစေတယ်…
စန်းပွင့်လာဘ်ပွင့်စေပါတယ်…သစ်ဂျပိုးမှုန့်အနည်းငယ်ကို နေအိမ်ထောင့်တွေမှာ ဖြူးပေးခြင်းဖြင့်
မကောင်းတဲ့အရာတွေကင်းစေပြီး နေအိမ်ကိုအေးချမ်းစေပါတယ် ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေရစေပါတယ်…
သစ်ဂျပိုးအတောင့်လေးကို နေအိမ်ပြတင်းပေါက်တွေမှာထားပေးမယ်ဆိုရင် နေအိမ်ကို
မကောင်းသော အရာများကနေ ကာကွယ်တားဆီးပေးပါတယ်
သစ်ဂျပိုးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိသလောက် ပြန်လည်မျှဝေပါသည်…။
မိမိနအေိမျကို မကောငျးသော အရာမြားကနေ
ကာကှယျတားဆီးပေးနိုငျတဲ့ သဈဂပြိုးနဲ့ လောကီပညာရပျ
သဈဂပြိုးအမှုနျ့ အနညျးငယျကိုယူပွီး နအေိမျ ဝငျပေါကျမှာ ဖွနျးပေးပါ…
မကောငျးတဲ့အရာတှအေိမျထဲကို မဝငျစဘေူး အတိုကျအခိုကျကငျးတယျ လာဘျပှငျ့စတေယျ…
သဈဂပြိုးအနညျးငယျ ဆနှငျးအနညျးငယျကို ရထေဲထညျ့ပွီး ရခြေိုးပေးရငျမကောငျးတဲ့
အညဈအကွေးတှေ အညှိတှေ သနျ့စငျစတေယျ ကောငျးတဲ့အရာတှကေိုရရှိစတေယျ…
စနျးပှငျ့လာဘျပှငျ့စပေါတယျ…သဈဂပြိုးမှုနျ့အနညျးငယျကို နအေိမျထောငျ့တှမှော ဖွူးပေးခွငျးဖွငျ့
သဈဂပြိုးအတောငျ့လေးကို နအေိမျပွတငျးပေါကျတှမှောထားပေးမယျဆိုရငျ နအေိမျကို
မကောငျးသော အရာမြားကနေ ကာကှယျတားဆီးပေးပါတယျ
သဈဂပြိုးနဲ့ပတျသတျပွီး သိသလောကျ ပွနျလညျမြှဝပေါသညျ…။
“၂၀၂၁ခုနှဈ(စတငျဘာလ)စနေ သားသမီးမြားအတှကျ တဈလစာအထူးဟောစာတမျး”
“၂၀၂၁ခုနှဈ(စတငျဘာလ)သောကွာ သားသမီးမြားအတှကျ တဈလစာအထူးဟောစာတမျး”
ကိန်းရှိသည်ရွှေ၊ငွေရတနာများလည်းဝင်မည်ပတ်ဝန်း ကျင်၏သပုတ်လေလွင့်ပြောဆိုခြင်းခံရမည် ကိစ္စတစ်ခုကိုလွယ်လွယ်နှင့်မဆုံးဖြတ်ပါနှင့်စိတ်အေး
ကိနျးရှိသညျရှေ၊ငှရေတနာမြားလညျးဝငျမညျပတျဝနျး ကငျြ၏သပုတျလလှေငျ့ပွောဆိုခွငျးခံရမညျ ကိစ်စတဈခုကိုလှယျလှယျနှငျ့မဆုံးဖွတျပါနှငျ့စိတျအေး